12 Firaisana ara-nofo ny vehivavy Fanontaniana mangingina Want VALIN'NY
Vehivavy Private Talk: 12 Firaisana ara-nofo ny vehivavy Fanontaniana mangingina Want VALIN'NY
Lohahevitra:12 Firaisana ara-nofo ny vehivavy Fanontaniana mangingina Want VALIN'NYSex fanontaniana	Posted by: Fisayo
Aoka ny ho upfront eto, Misy fanontaniana sasany manamorona momba ny firaisana ny vehivavy loatra fa matahotra ny hangataka avy mafy. Tsy afaka manontany ny sipa na ny vadiny, ary azo antoka fa tsy afaka na dia manontany ny Zinekôlôgy satria menatra loatra mba hitady ny valin 'ireny zavatra ireny. Fa tsy mba manahy, dia tsy voatery Google ny valiny intsony, satria ny fanontaniana rehetra ary namaly nanontany eto.
Moa azo atao hanimba ny mpiara-miasa ny filahiana mandritra ny firaisana ara-nofo mafy?
Ny valiny dia eny. Lehilahy iray ny filahiana dia tsy mbola ny taolana na ny vy, dia vilany engorges-dra amin'ny tairina, toy izany ny vehivavy mavitrika an-tampon'ny afaka hanimba ny zavatra raha mahazo mavitrika loatra amin'ny bisikileta. Tsy mahahenjana ary na hitarika ny ratra eo amin'ny filahiana, noho izany dia tsara ny maka azy, satria mora azo ny taova simba, ary nadika hoe ratsy tarehy taorian'ny fandidiana fanitsiana.
Mety ho ny kapaoty ho lavo eny tao anatiko?
Dia tena mahazatra ny kapaoty mba solafaka ny eny mandritra ny mpanao firaisana ara-nofo fa izao zara raha mitranga. Ny zavatra tsara indrindra ny vehivavy atao dia ny amim-paharetana retrieve ny fingotra ary avy eo dia azo antoka ny votoatiny tsy raraka. Toy izany fimailo tsy tokony ho ampiasaina indray izao intsony, fa iray vaovao. Izany zava-nitranga matetika no mitranga amin'ny olona amin'ny kely indrindra-pananana.
Nahoana no sarotra amin'ny fanatanterahana levitra nandritra ny firaisana ara-nofo?
Tsy manana na inona na inona mety ao aminao raha tsy hanatratra levitra mandritra ny firaisana ara-nofo. Ny marina dia ny vehivavy sasany manana firaisana ara-nofo mandritra levitra, ny hafa mandritra ny clitoral tairina, nefa ny hafa amin'ny alalan'ny filahiana, ary ny hafa amin'ny alalan'ny fitambaran'ny fomba hafa. Tsy maintsy ho marihana na izany aza fa ny vehivavy mila tokony tena misy vidiny sy matoky am-pandriana mba hahatratra Hamarana ny fotoana rehetra; ary izany no tsara indrindra hijanona eny zava-mahadomelina satria mety hisy fiantraikany ireo sy ny firaisana ara-nofo libido valin-.
Nahoana aho no mahatsapa fa ilaina ny firaisana ara-nofo mandritra ny Pee?
tsara, ny marina dia ny fahatsapana ny Pee ihany fihetseham-po, zara raha misy no mahatsapa fa ilaina ny firaisana ara-nofo mandritra ny Pee. Manam-pahaizana hoe raha misy vehivavy mila mahatsiaro izy mandritra ny firaisana ara-nofo Pee, izany dia midika hoe ny lehilahy no mikapoka tsara eo ny G-toerana, ary izany no saika nitondra azy akaiky levitra.
Inona no azoko atao rehefa ny fivaviana manao firaisana ara-nofo mandritra ny feo?
Izany no antsoina hoe queefing ary tsy misy na inona na inona raha ny marina kely ny azonareo atao momba izany. Miseho rehefa voafandrika rivotra ao an "lafaoro" afa-mandositra tahaka ny namely ianao mandritra ny firaisana, ary mety ihany koa ny hitranga avy hatrany aorian'ny firaisana ara-nofo. Izany dia tsy misy ifandraisany amin'ny na ny zavatra tsy mifatotra, na mafy.
Tsy mahazo lena mandritra ny firaisana ara-nofo. Inona no tokony hataoko?
Ny ankamaroan'ny vehivavy mahazo lena teo ambanin'ny nandritra ny firaisana ara-nofo sy ny arousal foreplay, fa izany dia afaka hampihena wetness toy ny firaisana ara-nofo mahazo intsony. Wetness mahatonga mora ho an'ny olona ny miditra, aminareo sy izy nandritra ny firaisana ara-nofo nampalahelo misakana, fa raha tsy mahazo lena na ny firaisana ara-nofo mandritra ny foreplay, dia mety koa mampiasa ny lubricant toy ny Vaseline Jelly ny fomba fikojakojana ny tenanao.
Ny mpiara-miasa te ho lava-pitombenana. Tokony ho manaiky?
Tsy maintsy manaiky ihany ianao, raha ekena izany, na te hanandrana. Fa raha tsy, tsy maintsy manao ny mpiara-miasa hahatakatra ny antony. Raha manapa-kevitra ny handeha, dia tsy maintsy mampiasa be dia be Vaseline Jelly na lubricant hafa mba hanampy ka ho azo antoka ny mampiasa kapaoty mba hiarovana amin'ny bakteria sy ny feaces nandritra ny hetsika. Ny kapaoty dia tsy maintsy ho niova ny anankiray iray raha te-mifamadika amin'ny lava-pitombenana ny fivaviana mba hisorohana nafindrany bakteria manodidina.
Inona no dikan'ny hoe ny vehivavy ny squirt?
Fitifirana dia ny vehivavy dika ny olona ny ejaculation. Vehivavy squirt mandritra ny firaisana ara-nofo na ny filahiana rehefa taitra mafy izy ireo, ary hanafaka tsiranoka avy amin'ny urethra. Tsy hitranga amin'ny rehetra ny fotoana sy ny tsy ho sahiran-tsaina amin'ny fisotrony, tsy.
Ny filahiana dia curved. Vonjeo!
Tsy misy fanampiana ilaina eto raha tsy mazava ho azy izy Peyronie ny aretina izay mahatonga ny olona ny filahiana ho curved vokatry ny firaisana ara-nofo mandritra ny nandratra azy. Fa maro ny olona efa curved penises ary tsy midika na inona na inona, Raha ny marina dia mety hanampy azy mba namely Anao tao amin'ny fitoerana tsara, raha miditra. mazava ho, ny olona tsy mitovy habe, endrika, sy ny lokony rehefa tonga ny fitaovam-piadiana - toy ny vehivavy hafa fivaviana sy ny tratrany habe, endrika, sy ny loko.
Hataoko fa nihodina tamin'ny vehivavy miray amin'ny vehivavy, rehefa mijery vetaveta.
Izany dia nitranga ny vehivavy sasany, ary ny hafa raha ny fandehany eny. Fa ny vehivavy izay atao niverina tamin'ny tovovavy roa, rehefa mijery izany ao vetaveta, tsy voatery hoe izy ireo ihany koa ny maniry na te-hahazo akaiky tamin'ny ankizivavy iray hafa na ny vehivavy. Toy ny vehivavy dia mety manonofinofy momba ny namany, fa tsy te ho tena firaisana ara-nofo aminy.
Inona no azoko atao, raha ny filahiana fotsiny lehibe loatra na kely loatra?
Tsy misy na inona na inona azonao atao, fa ny miresaka momba izany miaraka - indrindra fa raha tsy mahatsapa ny kely na ny lehibe zavatra mampalahelo misy anao mandritra ny firaisana ara-nofo. Fa zavatra iray hafa: dia afaka mampiasa be dia be ny fitaovam-piadiana lubricant raha lehibe loatra, ary afaka ihany koa ho eo an-tampony mba hibaiko ny Mazava ho azy fa ny hetsika tamin'ny taova lehibe; ary ny iray kely, ny lehilahy dia afaka manandrana toerana samy hafa, na mampiasa ny rantsan-tànany fotsiny sy ny vavany mba hampifaly anao.
Tiako ny mpiara-miasa mba hanatanteraka am-bava amiko.
Raha izany no tianao dia tsy maintsy mampiseho azy. Maro ny olona no tsy tia ny mitaiza kely midina any, fa tsy maintsy isehoanao fa mendrika ny ho milamina sy madio teo an-trano. Raha tsy mahay am-bava, rehefa izany dia tokony hanampy amin'ny fanomezana azy Nahay ny mihetsika, hafainganam-pandeha sy ny fanerena dia afaka mampihatra ny faritra saro-pady ny lava-bato.
Fa ahalalan-javatra bebe kokoa, manampy, ary Tena nanaovana fikarohana lalina ny fahasalamana sy ny Fitness loha anatiny, fitsidihana www.HealthFitnessResource.com
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny "Vehivavy Private Talk: 12 Firaisana ara-nofo ny vehivavy Fanontaniana mangingina Want VALIN'NY"
Tsy maninona na ianao misy lehilahy na vehivavy: siramamy be loatra dia ratsy noho ny aminareo sy izy nahafaty…